Fanjakana tan-dalàna : Sao mba ao Ambohidahy no vaha-olana ? - ewa.mg
Fanjakana tan-dalàna : Sao mba ao Ambohidahy no vaha-olana ?
News - Fanjakana tan-dalàna : Sao mba ao Ambohidahy no vaha-olana ?
Azo hamaritana ny loko mainty ho lasa fotsy ve ny lalàna velona eto amintsika eto? Aleo kosa mba hifanarahana fa ny fotsy dia fotsy, ary eo ambonin’izay fahafotsiana izay no hanoratana amin’ny ranomainty mazava tsara izay lalàna tokony harahina sy hampanjakaina. Tompon’antoka amin’ny fiarovana ny lalàna fototra mampijoro ny fitondrana eto amintsika eto, ny etsy Ambohidahy etsy. Koa rehefa ireo no mangina dia “marina” izany ny fihetsiky ny mpitondra. Izany tokoa ve?
Fa ny nahatonga ny olana teto ka mbola tsy voavaha hatramin’izao dia noho ilay “taratasy tsotra” nataon’ny tao Ambohidahy ny maraim-ben’ny 18 martsa 2009. Io ilay taratasy lah 079-HCC/G manoritsoritra fa manomboka io vaninandro io, dia hafa fa tsy ilay nofidiam-bahoaka no mitantana an’I Madagasikara…
Vao tamin’iny herinandro lasa iny dia ny HCC ihany koa no nilaza fa tsy misy toerana ho an’ny mpanohitra eny Tsimbazaza eny…Io HCC io ilay nampanao ny atao hoe: memorandum izay nentina niadiana tamin’ny fanonganan’ny teny Tsimbazaza…Mbola ry zareo ihany koa no nilaza fa tsy olana ilay andininy faha-54 amin’ny lalampanorenena rehefa manendry Praiminisitra.
Na inona na inona ho lazain’ny HCC dia noho ny antony politika hatrany no handraisany ny fanampahan-kevitra rehetra ataony. Raha hitany fa mety izao zava-tsarotra diavin’ny firenena izao dia aoka ho raisiny ho adidy ny mampahafantatra amin’ny vahoaka rehetra sy ny mpifanandrina politika ny fetra farany tsy maintsy hiaretana izao fifandimbiasan’ny lalàna sy ny tsy lalàna izao fa mandany andro lava loatra isika…
Mety ho sarotra tanterahina izany rehetra izany kanefa rehefa ny firenena no handrandraina dia azo havadika ho fotsy hatrany ny mainty. Asa anefa! Mora tokoa ny mandrodana raha ampitahana amin’ny manangana fanjakana tan-dalàna e!
Cet article Fanjakana tan-dalàna : Sao mba ao Ambohidahy no vaha-olana ? est apparu en premier sur déliremadagascar.
L’article Fanjakana tan-dalàna : Sao mba ao Ambohidahy no vaha-olana ? a été récupéré chez Délire Madagascar.
Nivoaka tamin'ny : 10/12/2020
Fiketrehana fanakorontanana amin’ny fomba rehetra. Tsy nahomby ny fanakorontanana tamin’ny hetsiky ny mpianatry ny ENS tany Antsiranana. Efa fantatra ireo tao ambadika sy ireo fivorivoriana natao tamin’izany. Tonga indray koa ny fanaratsiana sy fanavakahavahana hatramin’ny fanilihana ireo mpiavy ao Diana ao, amin’ny alalan’ny “video” nataon’ny olona iray. Tsy vitan’izany fa enjehina sy ambara ho tsy miasa sy tsy manao ny andraikiny ny olom-boafidy, indrindra fa ny depiote voafidy tao Antsiranana I, Rahelihanta Jocelyne sy ireo mpiara-dia aminy. Notsinontsinoavina amin’izany ny safidin’ny ankamaroan’ny vahoakan’Antsiranana. Hindrahindraina mafy kosa ny mpanao politika iray sady mpitarika fikambanana any avaratry ny Nosy iny ka nilazana fa diso sy tsy mahay mifidy ny any an-toerana. Tsy zakan’ny sasany ny asa soa ataon’ireo olom-boafidy, izay tsy ijerena loko sy firehana na fiaviana.Midika izany fa misy miketrika fanakorontanana sy tsy mahazaka ny demokrasia any an-dRenivohitry ny faritra Diana any. Miditra amin’ny fanaovana politika maloto, tsy mitondra fampandrosoana.Synèse R. L’article Antsiranana: misy mandranitra fanilihana a été récupéré chez Newsmada.
RAJOELINA ANDRY :: « Hanaovana fotodrafitrasa ny ampahany betsaka amin’ny vola azo avy amin’ny kraoma »
Toerana manan-karena nefa isan’ny sahirana indrindra amin’ny lafiny fotodrafitrasa fototra ny any Tsaratanàna, Andilamena ary Maeva­tanàna. Samy nandehanan’ny kandidà Rajoelina Andry avokoa ireo tanàna ireo, omaly tontolo. Naverin’ity kandidà laharana faha-13 ity hatrany teo anatrehan’ireo vahoaka maro fa « velirano no ataony amin’ny fampandrosoana ny firenena ». Samy niresaka momba ireo maha­rary ny mponina tany amin’ireo faritra ireo kosa ny tenany nandritra ny fandraisam-pitenenana nataony. Isan’ny fampanantenana nataony ary tsy maintsy hotanterahiny tamin’ireo mponina tany Brieville-Tsaratanàna ny fananganana hôpitaly manara-penitra sy kianja fanaovam-baolina. « Ireo vola tombony azon’ny orinasa Kraoma no hanam­piana hananganana ireo fotodrafitrasa ireo», hoy izy. Nilaza ampahibemaso amin’ny fandraisana andrai­kitra avy hatrany ho amin’ny tombontsoan’ireo mpiasa ao amin’ny Kraoma Rajoelina Andry, vantany vao lany ho Filoham-pirenena. Tany Andilamena kosa dia sahy nilokaloka amin’ny fanamboarana ny lalana mampitohy an’Andilamena sy Mahatsara ary Andilamena sy Vohitraivo ny kandida laharana faha-13. Ankoatra an’ireo dia hahazo rano fisotro madio sy herinaratra Andilamena rehefa tonga Filoham-pirenena ny tenany. Ankoatra izay, nibahan-toerana tany Maevatanàna sy Tsaratanàna tamin’ny fampanantenan’ny kandidà Filohan’ny Tetezamita teo aloha ny lafiny tsy fandriampahalemana. Nampi­taraina ny mponina mafy tany amin’ireo toerana ireo mantsy io olana lehibe iray manimba ny fiainan’izy ireo io. « Hatsangana aty ny Hery vonjy taitra manokana. Hovatsiana fitaovana manara-penitra, toy ny fiara tsy mataho-dalana, ny helikôptera sy ny fiaramanidina kely (drône) ireo mpitandro filaminana”, hoy izy. Nampanantenain-dRajoelina Andry tamin’ireo vahoaka fa “hamboarina ny lalana mampitohy an’i Tsara­tanàna sy Ambon­dromamy rehefa tonga eo amin’ny fitondrana izy”. L’article RAJOELINA ANDRY :: « Hanaovana fotodrafitrasa ny ampahany betsaka amin’ny vola azo avy amin’ny kraoma » est apparu en premier sur AoRaha.
La déclaration a été effectuée à Ankatso hier. «Face à la situation épidémiologique qui prévaut actuellement, nous exigeons la mise en place d’un centre médico-social opérationnel équipés de médecins auprès du campus universitaire». C’est ce qui a été annoncé lors d’une déclaration des associations régionales des étudiants de l’Université d’Antananarivo ainsi que des associations des blocs universitaires de la même université à Ankatso hier. Déclaration qui voudrait attirer l’attention des responsables étatiques quant aux mesures devant être prises afin de protéger les étudiants d’éventuelles contaminations à la maladie mais surtout de les aider à faire face à la crise socio-économique actuelle. Les étudiants du campus universitaire d’Antananarivo réclament également «aux autorités compétentes de désinfecter les cités universitaires et de les faire bénéficier de masques, de savons ou encore des gels hydroalcooliques». Ils demandent aussi la distribution «d’aides sociales pour leurs collègues habitant les cités universitaires». Outre les aspects sociaux, les étudiants de l’université d’Antananarivo ont également touché mot sur la nécessité pour les autorités étatiques de trouver dans les plus brefs délais, des solutions pérennes, rapides et sans risque de propagation de la Covid-19 permettant la reprise des activités pédagogiques. «Des solutions qui conviendraient à tous les universitaires», selon toujours ces associations estudiantines. Recueillis par José Belalahy L’article Covid-19 à l’Université d’Antananarivo : Les associations estudiantines interpellent l’État est apparu en premier sur Midi Madagasikara.L’article Covid-19 à l’Université d’Antananarivo : Les associations estudiantines interpellent l’État a été récupéré chez Midi Madagasikara.
Inona sy aiza ny tena olana? Faralahy ny any amin’ny faritra Itasy. Tsy mba hita ny governora manoloana ny fitantanana ny faritra. Efa voatendry amin’ireo governora andiany voalohany ny mpitantana nefa tsy misongadina ny bainga voavadika, raha mitaha amin’ireo faritra, niara-notendrena taminy.Tsy mba hita taratra ny fandrosoana any amin’ireo distrika telo: i Miarinarivo sy Arivonimamo ary i Soavinandriana. Betsaka ireo fotodrafitrasa tokony hatsangana na hatsaraina, saingy tsy misy hetsika ataon’ny mpitantana eo anivon’ny faritra. Efa simba na ratsy ny ankamaroan’ireo fotodrafitrasa any an-toerana fa tsy misy fijerena izany. Tahaka izany koa ny fanamboaran-dalana. Tsy mifanaraka amin’ny tokony hatao sy hamboarina no vita. Tafiditra ao anatin’izany ireo lalana famoahana ny vokatra mampalaza ny faritra Itasy.Zary isehosehoan’ny mpitantana ireo asa ataon’ny fanjakana foibe any an-toerana. Lasa ireo depiote indray no miady mafy hampandrosoana ny any an-toerana. Araka izany, tokony hojerena akaiky ny fitantanana tahaka izao.Synèse R. L’article Fitantanana eny ifotony: tsy hita taratra ny fampandrosoana any Itasy a été récupéré chez Newsmada.
Tsy manaja ny fiarahamonina
Mitaraina ireo mponina ny amin’ny afitsok’ireto mpiavy ireto. Nambaran’ny talen’ny parka, Jaotera sy ny ben’ny Tanàna Marosakoa, Gilbert, fa angalarin’izy ireo ny mangahazo maniry eny an-tanimboly. Kely hery ny tompon’andraikitry ny parka sy ny ben’ny Tanàna, satria mirongatra ny tsy fandriampahalemana. Nisy tamin’ny mpiasan’ny parka novonoin’ireto olona ireto. Marobe izy ireo satria mahatratra 20 hatramin’ny 30 ny andiany, ary sahy mihantsy ny mpitandro filaminana mihitsy, sady mahery setra satria miaraka amin’ny antsy sy lefona. « Mila ampiana tafika ireo zandary aty aminay satria tsy ampy isa », hoy ny ben’ny Tanàna, Gilbert sy ny an’Andranofasika, Ngilitera Alan.Anisan’ny fomba fifanarahan’ireo mpiavy amin’ny tompon-tany ny hisasahana ny vokatra. Nilaza Ravelo Germain, tompon-tany any Ambongomaranitra, fa tsy manaja ny fifanarahana ireo olona ireo, satria angalarany ny fatran’ny vokatra tokony hisasahana.Tsy manana kopia, tsy mianatra ny zazaAraka ny voalaza etsy ambony, tsy manana taratasy ara-dalàna ny ankamaroan’ireo mpiavy avy any atsimo. Nilaza ny sefo fokontany Ambongomaranitra, Rakotondrabe Monnal, fa miisa 4.526 ny mponina ao aminy, ary tsy manana taratasy ara-dalàna ny ankamaroan’ireo mpiavy, manodidina ny 70%.Nambaran’ny talen’ny parka, Jaotera, fa nisy sekoly naorin’ny ONG iray, saingy tsy misy ny mpianatra satria tsy manana taratasy sora-piakohonana ny zanak’izy ireo.Nanatontosa: Njaka AndriantefiarinesyL’article Tsy manaja ny fiarahamonina a été récupéré chez Newsmada.
JIOI – Ambasadaoron’i Maorisy: « Zava-dehibe ny fandraisana anjaran’i Madagasikara »
Tonga nitsidika ny Minisitry ny Tanora sy ny fanatanjahantena, Tinoka Roberto, omaly, teny Ambohijatovo, ny Ambasadaoron’i Maorisy, Datakarran Goburdhun. Nodinihiny niaraka ny mahakasika ny fametrapetrahana farany ny fikarakarana ny lalaon’ny Nosy sy ny fandraisana ireo atleta malagasy miisa 302 hihazo ny Nosy Maorisy. Nanambara ity Ambasadaoron’i Maorisy ity fa zava-dehibe ny fandraisana anjaran’i Madagasikara, ary indrindra hahitana atleta malagasy avokoa ireo taranja miisa 15 hifaninana amin’io lalaon’ny Nosy io. Voninahitra lehibe ihany koa, hoy hatrany ny fanazavany, ny fahenoana fa mety ho avy any Maorisy ny Filoham-pirenena Andry Rajoelina, hanatrika ny lanonam-panokafana ity JIOI 2019 ity ny faha-19 jolay. Hanamafy bebe kokoa ny fiaraha-miasan’ny firenena malagasy sy Maorisy izao fifandraisana izao, raha ny nambaran’Andriamatoa Minisitra, Tinoka Roberto.Tonga teny Ambohijato ihany koa ny OIFAnkoatran’ny fitsidihan’ny Ambasadaoron’ny Maorisy an’Andriamatoa Minisitra, tonga teny Ambohijatovo ihany koa, omaly maraina, ny Ambasadaoron’ny OIF (Organisation Internationale de la Francophonie), i Malik Sarr. Mahakasika ny tanora sy asa no nifampidinihin’ny roa tonta izay nanazavana ny momba ilay andiany faha-3 amin’ny Forum ny ranomasimbe Indiana atao eto Madagasikara, manomboka amin’ny talata izao. Nanambara ny Ambasadaoron’ny OIF fa hisy tanora 200 ho avy eto amintsika hanampy ny tanora malagasy amin’ny fitadiavana famatsiam-bola sy fanampiana azy ireo. Mi.RazL’article JIOI – Ambasadaoron’i Maorisy: « Zava-dehibe ny fandraisana anjaran’i Madagasikara » a été récupéré chez Newsmada.
Lalana Rocade: atao hampalalaka ny fifamoivoizana eto Antananarivo
Omaly, nanazava ny lafiny teknika ny lalana Rocade Atsinanana sy Avaratra Atsinanana ny lehiben’ny tetikasa ao amin’ny Agence Routière, Rakotovao Rivoary. Lalana atao hampalalaka ny fifamoivoizana.Mirefy 8,2 km io lalana io (lalan-droa), atao hampalalaka ny fifamoivoizana. Mpanara-maso ny asa ny Cetec, mpanatanteraka ny Sogea Satom. Mirefy 3,8 km ny Rocade Atsinanana, ny Avaratra Atsinanana, 3,4 km. Avy eo amin’ny masoivohin’i Chine ny fidirana an-dReni­vo­hitra, 1 km (lalan-tokana). Nanomboka tamin’ny 15 mey 2018 ny asa, mitentina 62,8 tapitrisa euros, famatsiana avy amin’ny AFD, UE, BEI, fanjakana malagasy. Nasiana tetezana fiampitana avy any amin’ireo fokontany, fiampitana any ambany sy lalana eny amorony voafefy natokana ho an’ny mpandeha an-tongotra sy bisikileta. Ahi­tana tetezana roa : Ampa­simbe sy Soamanandrariny. Manana endrika tanàn-dehibe kokoa ny lalana. Eo am-pama­ranana ny asa izao, 99 % ny vita, ny asa madinidinika sisa tavela. Vinavina tokanana amin’ny 24 jona ary hisokatra ho an’ny daholobe avy ha­trany.Andraikitry ny rehetra Hisy taxi-be zotra vaovao, hanampy ireo efa misy afaka mandeha amin’io Rocade io. Eo am-piomanana izany ny kaominina sy ny minisiteran’ ny Fitaterana. Andraikitry ny rehetra, ny kaominina sy ny fokontany manamorona ny fanaraha-maso ny fotodrafitrasa, atao haharitra amam-polo taona. Napetraka ireo fe­petra hisorohana ny loza araka izay azo atao : famerana ny hafainganam-pandeha, sns, ary tsy maintsy hisy mpitandro filaminana. Ny fanefana onitra ireo olona voakasiky ny fanaovana ny Rocade no olana. Na izany aza, 70 % efa nandray ny azy ho an’ireo nanana taratasy fanamarinan-tany mazava, ny ambiny eo am-pikarakarana ny taratasiny, miaraka amin’ ny minisitera hanafainganana ny fikarakarana izany.R.MathieuL’article Lalana Rocade: atao hampalalaka ny fifamoivoizana eto Antananarivo a été récupéré chez Newsmada.